Mekete Tigray UK - တီဂေးသတင်းများ - ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု၏ပွင့်လင်းသောလေပြတိုက်
Mekete Tigray ဗြိတိန်
Tigray News - ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု၏ Open Air Museum
အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးရာ ကော်မတီက အီသီယိုးပီးယားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
လတ်ဆတ်သော အီသီယိုးပီးယား လေတပ်၏ တိုက်ခိုက်မှုများသည် Tigray ဒေသကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
အီသီယိုးပီးယား- နောက်တစ်ခုက ဘာလဲ။
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှင့်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးညှိနှိုင်းရေးမှူး Martin Griffiths ကအီသီယိုးပီးယားလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သည်
24 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးရာ ကော်မတီက အီသီယိုးပီးယားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
(အရင်းအမြစ်: GovTrack) - H.Res 445- အီသီယိုးပီးယားရှိ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအားလုံးကို ရှုတ်ချပြီး … … အီသီယိုးပီးယားအစိုးရနှင့် အီရီထရီးယားပြည်နယ်အစိုးရတို့အား အီရီထရီးယားတပ်များအားလုံးကို အီသီယိုးပီးယားမှဖယ်ရှားရန်နှင့် အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအပါအဝင် ပဋိပက္ခအတွင်း သူပုန်အားလုံးအတွက် တောင်းဆိုထားသည်။ တပ်ဖွဲ့များ၊ Tigray ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး၊ […]
24 အောက်တိုဘာလ 2021 24 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား လတ်ဆတ်သော အီသီယိုးပီးယား လေတပ်၏ တိုက်ခိုက်မှုသည် Tigray ဒေသကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
(Source: CNN, Bethlehem Feleke, Vasco Cotovio and Jeevan Ravindran) - အီသီယိုးပီးယားလေကြောင်းတပ်များသည် Mai Tsebri နှင့် Adwa ဒေသများကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ Tigray မြောက်ပိုင်းဒေသတွင် အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Legese Tulu က CNN သို့ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ သပိတ်တွေထဲက […]
24 အောက်တိုဘာလ 2021 23 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား အီသီယိုးပီးယားအကြောင်း- နောက်တစ်ခု။
(Source: RUSI၊ By Simon Rynn နှင့် Ahmed Hassen၊ 22 အောက်တိုဘာ 2021 2020 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် ဖက်ဒရယ်အစိုးရနှင့် Tigray ရှိ သောင်းကျန်းသူတပ်ဖွဲ့များကြားတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခတွင် နစ်မြုပ်နေခဲ့သော အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အခြေအနေများစွာကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် ကုလသမဂ္ဂရုံး၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေး အကြီးအကဲက အီသီယိုးပီးယားတွင် အငတ်ဘေးကြုံနိုင်ကြောင်း သတိပေးခဲ့သည်။
23 အောက်တိုဘာလ 2021 23 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှင့်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးညှိနှိုင်းရေးမှူး Martin Griffiths တို့ကအီသီယိုးပီးယားလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကြေညာချက်
(ရင်းမြစ်- UN OCHA၊ အောက်တိုဘာလ 22 ရက်၊ 2021) - ယနေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် အီသီယိုးပီးယားရှိ ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ လေယာဉ်တစ်စင်းသည် တီဂရေးမြို့ရှိ Mekelle သို့ ဦးတည်သွားသော အီသီယိုးပီးယားတွင် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် Addis Ababa သို့ ပြန်သွားခဲ့ရသည် - Mekelle ၏ လုံခြုံရေးအတွက် ဆိုးရွားသော စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတွေဟာ အရပ်သားတွေကို ကူညီဖို့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ […]
23 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား မာနကြီးသောဖုတ်ကောင်အတွက် မြှုပ်နှံရန်တောင်းဆိုချက်။
(Temesgn Hulu မှ) - ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်၏ဦးခေါင်းကို မြှုပ်နှံထားသည်မှာ ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီး လူအုပ်ကြားတွင် ဗြောင်းဆန်စွာ လျှောက်လှမ်းကာ ကုန်းမြင့်ကို ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့် သင်၏ တန်ခိုးကြီးသော သန်မာသော မြေကြီးစွမ်းအားကို ကြောက်ရွံ့သောကြောင့်၊ သည်းခံမှု ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်သည့် တစ်နေ့တွင် သင်မျှော်လင့်ချက်သာ ချွတ် အထပ်ထပ် နင်းမိနေမယ့်အစား၊ […]
Tigray အစိုးရသည် Tigray နှင့် UNHAS လေကြောင်းမှလူများကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကြေငြာချက်
23 အောက်တိုဘာလ 2021 24 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား Tigray နှင့် UNHAS လေယာဉ်စီး ပြည်သူများအား လေကြောင်းမှ တိုက်ခိုက်မှု နှင့် ပတ်သက်၍ Tigray အစိုးရ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်
အီသီယိုးပီးယားအစိုးရသည် ကုလသမဂ္ဂလေယာဉ်အား လေထဲ၌ ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရန် တမင်ရည်ရွယ်၍ စီစဉ်ခဲ့သည်။
23 အောက်တိုဘာလ 2021 23 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား အီသီယိုးပီးယားအစိုးရသည် ကုလသမဂ္ဂလေယာဉ်ကို လေထဲ၌ ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရန် တမင်ရည်ရွယ်၍ စီစဉ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
(Source: Globe News Net) - Tigray နှင့် တစ်နှစ်ကြာ ပဋိပက္ခများ ပြင်းထန်လာသဖြင့် အကူအညီပေးရေး လုပ်သား ၁၁ ဦး တင်ဆောင်လာသော လေယာဉ်ကို အစိုးရက သတိပြုမိကြောင်း ကုလ က ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် အီသီယိုးပီးယား စစ်တပ်မှ လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှု အရှိန် ပြင်းပြင်းနှင့် ၄:၃၀ မိနစ် ကွာဝေးသော ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာ လေကြောင်း ခရီးစဉ်ကို တွန်းအားပေး ခဲ့သည်။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ရန် Tigray ၏မြို့တော် Mekelle တွင်ဆင်းသက်သည်။ အီသီယိုးပီးယား အစိုးရ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Legesse Tulu […]
23 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား on ከትግራይ መንግስት የተሰጠ ወቅታዊ መግለጫ
22 အောက်တိုဘာလ 2021 22 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား አቤትመመሳሰልታሪክእራሱንእራሱንደገመለአምስተኛጊዜመቐለዛሬምተደበደበች
(ရင်းမြစ်: Kokeb Media ኮኾብሚዲያ) -
အီသီယိုးပီးယားအစိုးရသည် Tigray ဒေသမြို့တော်အားယခုအပတ်တွင်လေးရက်မြောက်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်
22 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား အီသီယိုးပီးယားအစိုးရသည် Tigray ဒေသမြို့တော်အားယခုအပတ်တွင်လေးရက်မြောက်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်
(Source: reuters, ADDIS ABABA) - အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Tigray ဒေသ၏မြို့တော်အားသောကြာနေ့ကစတုတ္ထမြောက်နေ့အဖြစ်လေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Legesse Tulu ကသောကြာနေ့ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုသည်ယခင်ကအီသီယိုးပီးယားစစ်တပ်ပိုင်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုပစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးယခု […]
22 အောက်တိုဘာလ 2021 21 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား Tigray အပေါ်စစ်ပွဲသည်ဘာ့ကြောင့်လည်းဒီမိုကရေစီရေးစစ်ပွဲဖြစ်သည်
(Gebremichael Zeratsion, MD) - ငါတို့သည် Tigray တွင်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုစစ်ပွဲ၏နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်သည့် Abiy Ahmed နှင့်သူ၏ Amhara မဟာမိတ်များ၊ Isaias Afwerki နှင့် Mohamed Farmaajo တို့နှင့်သုံးလပတ်လုံးဝေးကွာသည်။ လေ့လာသူများစွာအတွက်စစ်ပွဲ၏မူလဇစ်မြစ်ကို Abiy အကြားအာဏာလွန်ဆွဲပွဲတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်သည်။
STJ: Mekelle မြို့အားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိသောလေကြောင်းမှဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်အရေးပေါ်ခေါ်ဆိုပါ
22 အောက်တိုဘာလ 2021 22 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား STJ တွင် Mekelle မြို့အားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိသောလေကြောင်းမှဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်အရေးပေါ်ခေါ်ဆိုသည်
Tigrayans အတွက်လုံခြုံရေးနှင့်တရားမျှတမှုအတွက်ချက်ချင်းဆိုသလိုဖြန့်ချိရေးသည် US 501 (c (3)) မှတ်ပုံတင်ထားသောအကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Tigrayans များ၏သာယာဝပြောရေးကိုကမ္ဘာ့အဆင့်တွင်ထောက်ခံသည်။ ] ယနေ့ SJT သည်ဤအရေးပေါ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုထုတ်ဝေသည်။ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များ၊ ကုလသမဂ္ဂ၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ အာဖရိကသမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူသား […]
အီသီယိုးပီးယားသည် Tigray မြို့တော် Mekelle ကိုယခုအပတ်တွင်လေးကြိမ်မြောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်
21 အောက်တိုဘာလ 2021 21 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမှ Tigray မြို့တော် Mekelle ကိုယခုအပတ်တွင်လေးကြိမ်မြောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်
(Source: Mail Online, By Afp)-အီသီယိုးပီးယားသည်ကြာသပတေးနေ့တွင်စစ်စုတ်ပြတ်သတ်နေသော Tigray မြို့တော်အားနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အစိုးရ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Legesse Tulu […]
အီသီယိုးပီးယားသည် Tigray မြို့တော်အားလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုသစ်စတင်ခဲ့သည်
21 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ Tigray မြို့တော်အားလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအသစ်
(Source: Channel4News) - အီသီယိုးပီးယားသည်မြောက်ပိုင်း Tigray ဒေသ၏မြို့တော်အားလေကြောင်းမှထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ အီသီယိုးပီးယားနှင့် Tigrayan တပ်ဖွဲ့များအကြားတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည်မှာတစ်နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအစိုးရ၏ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ထိုဒေသတွင်နေထိုင်သောလူခြောက်သန်းကိုလိုအပ်နေသောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများဖြတ်တောက်လိုက်သည်။ ယနေ့တွင် […]
အီသီယိုးပီးယားသည်နာရီပိုင်းအတွင်း Tigray ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစစ်ပွဲများမြင့်တက်လာသည်
21 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား အီသီယိုးပီးယားတွင် Tigray ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများနာရီပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲများမြင့်တက်လာသည်
(Source: Reuters, ADDIS ABABA) - အကျဉ်းချုပ်အစိုးရ - Agbe ဒေသမြို့တော် Mekelle ၌သူပုန်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဒုတိယအကြိမ်ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းသည် Tigrayan တပ်ဖွဲ့များကနှစ်ရက်အတွင်းတတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု Tigrayan တပ်ဖွဲ့များကပြောသည်။ အီသီယိုးပီးယားအစိုးရသည် ၂ သန်းကျော်ကိုဒုတိယမြောက်လေကြောင်း […]
21 အောက်တိုဘာလ 2021 20 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား Trudeau သို့ Message တွင်: Tigray စစ်ပွဲအတွက်ကနေဒါ၏ထောက်ခံမှုကိုရပ်တန့်ပါ
(Source: Spring, By Tigray Advocacy Canada) - ကနေဒါ ၀ န်ကြီးချုပ် Justin Trudeau သည်သူနှင့်သူ၏နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသတိရှိမှုနှင့်အမျိုးသမီးဝါဒီအဖြစ်တံဆိပ်ကပ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီကိုအကြီးမားဆုံးလက်ခံရရှိသူတွေထဲကတစ်ခုကတော့ Tigrayan လူမျိုးတွေကိုရက်စက်တဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုစတင်ခဲ့တဲ့အီသီယိုးပီးယားအစိုးရဖြစ်ပြီး […]
တတိယမြောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုသည်အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ Tigray ဒေသ၏မြို့တော်ဖြစ်သည်
20 အောက်တိုဘာလ 2021 20 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား တတိယမြောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုသည်အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတီဂရာဒေသ၏မြို့တော်ဖြစ်သည်
(Source: AP, By Cara Anna, Nairobi, Kenya) - အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ Tigray ဒေသ၏မြို့တော်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအသစ်များပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုဒေသခံများကဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂက၎င်း၏ Tigray တည်ရှိမှုအားအစိုးရ၏ပိတ်ဆို့မှုအဖြစ်ထက်ဝက်ကျော်လျှော့ချခဲ့သည်။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများကြိုးပမ်းမှုနှင့်လူများသည်အစာရေစာချို့တဲ့မှုကြောင့်သေဆုံးသည်။ […] စစ်ပွဲ
Amhara ၏ပရိယာယ်နှင့် gasconade အမွေအနှစ်
19 အောက်တိုဘာလ 2021 22 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား Amhara ၏လှည့်စားမှုနှင့် gasconade အမွေအနှစ်အကြောင်း
(Temesgen Kebede မှ) - ወዲድሙአይገድፍግብረእሙ prog အမျိုးအနွယ်ကြောင်တစ်ကောင်သည်သူ့အမေ၏လုပ်ရပ်ကိုပုံတူကူးရန်ခဲယဉ်းလိမ့်မည်။ ငါကဒီအရာကသူမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းမကြင်နာရင်တောင်အကျဉ်းခန်းထဲက Amhara တစ်ယောက်ကသူ့ဘိုးဘေးတွေတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အင်ပါယာကိုသာမကဘဲ […]
Tigray ပြည်ပရေးရာရုံး (TEAO) အပတ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်အမှတ် ၁၁၊ Tigray ရှိလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအခြေအနေအကျဉ်းချုပ်
19 အောက်တိုဘာလ 2021 19 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား Tigray ပြည်ပရေးရာရုံး (TEAO) တွင်အပတ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်အမှတ် ၁၁၊ Tigray ရှိလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအခြေအနေအကျဉ်းချုပ်
ကုလသမဂ္ဂ၏အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ Mekelle တွင်သပိတ်မှောက်မှုကြောင့်ကလေးသုံး ဦး သေဆုံးခဲ့သည်
19 အောက်တိုဘာလ 2021 19 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား ကုလသမဂ္ဂ၏အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ Mekelle တွင်သပိတ်မှောက်မှုကြောင့်ကလေးသုံး ဦး သေဆုံးခဲ့သည်
(Source: Reuters, GENEVA) - အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ Tigray ဒေသ၏မြို့တော်အားတနင်္လာနေ့တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအတွင်းကလေးသုံး ဦး သေဆုံးပြီးတစ် ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးလုပ်သားများကပြောကြားခဲ့သည်။ Mekelle, Jens Laerke, ဆင်ခြေဖုံးရှိသပိတ်မှောက်မှုကြောင့်သေဆုံးဒဏ်ရာရသူများသည်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Eritreans နှင့် Amharas တို့သည်လွန်ခဲ့သော Oxen များနှင့်လယ်ထွန်ရန်တောင်းဆိုကြသည်
19 အောက်တိုဘာလ 2021 19 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား The Eritreans နှင့် Amharas တို့မှလွန်ခဲ့သောနွားများနှင့်လယ်ထွန်ရန်တောင်းဆိုသည်
(Yared Huluf မှ) - လူတွေကယုံရခက်တယ်။ နာရီနှင့်နေ့အချိန်၌သူတို့သည်သူတို့၏မာကျူရီဆန်သောကိုယ်ဟန်အနေအထားများကိုပိုဆိုးအောင်အမြဲပြောင်းလဲနေသည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုသင်ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေသည်။ ၎င်းသည်ခိုးရန်အရာ၊ လိမ်ရန်တစ်ချက်၊ အနီရောင်ဖမ်းသည်ဟူသောအမှန်တရားကိုငြင်းပယ်ရန်အခြားအရာဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ငြင်းဆိုပြီးနောက် ၄ နာရီအကြာ၌အမ်ဟာရစ်၌ Mekelle လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအီသီယိုးပီးယားအစိုးရက ၀ န်ခံခဲ့သည်
19 အောက်တိုဘာလ 2021 19 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ငြင်းဆိုပြီးနောက် ၄ နာရီအကြာ၌အမ်ဟာရစ်၌ Mekelle လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအားအီသီယိုးပီးယားအစိုးရမှဝန်ခံခဲ့သည်
(Source: Globe News Net) - အီသီယိုးပီးယားက၎င်းသည်ငြင်းဆိုပြီးနာရီပိုင်းအကြာ၌မြို့တော် Tigray၊ Mekelle မြို့တော်၌လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ Ethiopian Press Agency ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ Tigray ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့လက်နက်စက်ရုံတွေကိုပစ်မှတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ သို့သော်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်သက်သေအထောက်အထားများအရမိသားစုတစ်ခုမှအရပ်သားသုံး ဦး အသတ်ခံခဲ့ရပြီး […]
GSTS: အီသီယိုးပီးယားအစိုးရမှ Mekelle အရပ်သားများအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအားပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းနှင့် Tigray အပေါ်အရေးပေါ်လေယာဉ်မပျံသန်းရနယ်မြေတောင်းဆိုခြင်း
19 အောက်တိုဘာလ 2021 19 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား GSTS တွင်: အီသီယိုးပီးယားအစိုးရမှ Mekelle အရပ်သားများအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအားပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းနှင့် Tigray အပေါ်အရေးပေါ်လေယာဉ်မပျံသန်းရနယ်မြေတောင်းဆိုခြင်း
ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန် Re: Re: Ethiopian အစိုးရမှ Mekelle ရှိအရပ်သားများအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှင့် Tigray ကိုကျော်။ အရေးပေါ်လေယာဉ်မပျံသန်းရန်တောင်းဆိုခြင်း The Tigray ပညာရှင်များ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပညာရှင်များကယနေ့အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကိုအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်နိုင်သောအခြေအနေများတွင်ရှုတ်ချသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်မြို့တော် Mekelle ရှိအရပ်သားများအပေါ် […]
အီသီယိုးပီးယား - ဥရောပသမဂ္ဂသည်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအစီအစဉ်များနှင့် Addis Ababa သို့အလည်အပတ်ခရီးထွက်သည်
19 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား အီသီယိုးပီးယားတွင်ဥရောပသမဂ္ဂသည်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအစီအစဉ်များနှင့် Addis Ababa သို့အလည်အပတ်ခရီးထွက်သည်
(Source: ဥရောပသမဂ္ဂ)-နိုင်ငံခြားရေးရာကောင်စီ၊ Luxembourg သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၊ ၁၈/၁၀/၂၀၂၁-၂၂:၅၄၊ UNIQUE ID: ၂၁၁၀၁၈_၁၉ တွင်တတိယပြဿနာမှာ Ethiopia ဖြစ်သည်။ Tigray ရှိပဋိပက္ခ၏ပထမဆုံးနှစ်ပတ်လည်ကိုဝမ်းနည်းဖွယ်နှစ်ပတ်လည်နေ့အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ Tigray သည်လူသားများအားစနစ်တကျချိုးဖောက်မှုများကြောင့် […]
အီသီယိုးပီးယား ၀ န်ကြီးချုပ်ကနိုင်ငံအတွင်းသို့ရိက္ခာအကူအညီများရပ်ရန်ခြိမ်းခြောက်သည်
18 အောက်တိုဘာလ 2021 18 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား on အီသီယိုးပီးယား ၀ န်ကြီးချုပ်ကတိုင်းပြည်အတွင်းစားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေရပ်ဆိုင်းဖို့ခြိမ်းခြောက်လိုက်ပါတယ်
(Source: The Telegraph, ByWill Brown, AFRICA CORRESPONDENT18 အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ •ညနေ ၆း၀၀) - Tigray တွင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေစဉ်သန်းနှင့်ချီသောပြည်သူများသည်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်းအထောက်အပံ့အနည်းငယ်သာရရှိပြီးအီသီယိုးပီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကနိုင်ငံတကာစားနပ်ရိက္ခာအကူအညီများကိုရပ်ဆိုင်းလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်။ Tigray ရှိငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကိုရင်ဆိုင်နေရသောသန်းပေါင်းများစွာသောလူများထံသို့ပို့ဆောင်ခြင်းမှ […]
အီသီယိုးပီးယား - Tigray မြို့တော် Mekelle ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများ
18 အောက်တိုဘာလ 2021 18 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား အီသီယိုးပီးယားတွင် Tigray မြို့တော် Mekelle ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်
(Source: DW) - အဆိုပါကြေငြာချက်အား Tigrayan ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ် ဦး မှထိန်းချုပ်ထားသောဒေသတွင်း TV မှကြေငြာခဲ့ပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအရင်းအမြစ်များမှအတည်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကပဋိပက္ခစတင်ဖြစ်ပွားကတည်းက Mekele ကိုပထမဆုံးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်သည်။ Tigrai TV က Mekele မြို့ကိုတိုက်ခိုက်မှုဟာအီသီယိုးပီးယားဝန်ကြီးချုပ် Airstrikes […]
အီသီယိုးပီးယားသည်ပရမ်းပတာဖြစ်နေသည်။ Dayton ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်သစ်အတွက်အချိန်ရောက်ပြီ
18 အောက်တိုဘာလ 2021 17 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား အီသီယိုးပီးယားတွင်ပရမ်းပတာအခြေအနေသို့ကျဆင်းနေသည်။ Dayton ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်သစ်အတွက်အချိန်ရောက်ပြီ
(Source: Politico, ALEX RONDOS and MARK MEDISH)-အီသီယိုးပီးယားဝန်ကြီးချုပ် Abiy Ahmed သည် ၄ ​​င်း၏ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲအခမ်းအနား၌ကျည်ကာမှန်များနောက်ကွယ်တွင်စကားပြောနေစဉ်၊ အ | Mulugeta Ayene၊ File/AP Photo သန်းပေါင်းများစွာတို့သည်အစာရေစာငတ်မွတ်နေကြသည်။ ရက်စက်ယုတ်မာမှုများများပြားသည်။ ဒါပေမယ့်ပြန်လှည့်ဖို့အချိန်ရှိပါသေးတယ်။
“ ဘုရားသခင်သနားတော်မူပါ”: Tigray ဒေသခံများသည်ဝိုင်းထားမှုအောက်တွင်နေထိုင်ပုံကိုဖော်ပြသည်
17 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား “ ဘုရားသခင်သနားတော်မူပါ” ၌ Tigray ဒေသခံများကဝိုင်းထားမှုအောက်တွင်နေထိုင်ပုံကိုဖော်ပြသည်
(သတင်းရင်းမြစ်၊ AP၊ CARA ANNA၊ NAIROBI၊ ကင်ညာ) - ဝိုင်းရံခံနေရသောမြို့တစ်မြို့တွင်အစားအစာ ၀ ယ်ရန်နည်းလမ်းများနှင့်အမျှငယ်ရွယ်သောအမေသည်သူမမလုပ်နိုင်တော့ဟုခံစားမိသည်။ သူမကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေခဲ့ပြီးသူမကလေးတွေကိုမကျွေးမွေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ မြို့အနှံ့ရှိကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခုတွင်မုန့်ညက်ပြုလုပ်ရန်မုန့်နှင့်ဆီတို့ […]
ဘက်မလိုက်ဘူး၊ အခြေခံမကျဘူး၊ မစဘူး၊ အီသီယိုးပီးယားမှာအာဖရိကသမဂ္ဂဖျန်ဖြေ
17 အောက်တိုဘာလ 2021 15 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား ဘက်မလိုက်၊ အခြေခံမကျ၊ စတင်မပါ၊ အီသီယိုးပီးယားရှိအာဖရိကသမဂ္ဂဖျန်ဖြေရေး
(ရင်းမြစ်၊ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖောင်ဒေးရှင်း၊ MULUGETA GEBREHIWOT BERHE မှ) ကုလသမဂ္ဂ၏ထိရောက်သောညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးလမ်းညွှန်ချက်သည်ပဋိပက္ခများကိုဖြေရှင်းခြင်းအားကာကွယ်ခြင်း၊ စီမံခြင်းနှင့်အားလုံးထက်ပိုထိရောက်သောနည်းလမ်းများအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ သို့သော်လည်းထိရောက်စေရန်၊ ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ရာထူးကြီးသူတစ် ဦး ကိုခန့်အပ်ခြင်းထက်ပိုလိုအပ်သည်။ […]
Abiy Ahmed သည်စစ်ပွဲများကိုဖြစ်စေ၊ ချေမှုန်းရန်ဖြစ်စေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းအတွက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့သည်
16 အောက်တိုဘာလ 2021 15 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းအတွက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းအပေါ် Abiy Ahmed သည်စစ်ပွဲများကိုပြုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်ဖြိုဖျက်ရန်စတင်ခဲ့သည်
(Source: The Independent)-Tigray ရှိ Addis Ababa မှနောက်ဆုံးထိုးစစ်သည်သာမန်လူထုအပေါ်၎င်း၏သက်ရောက်မှုအပေါ်ကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်စေသည်ဟု Ahmed Aboudouh ကရေးသားခဲ့သည်။ လူများသည်အထောက်အထားစာရွက်များစွာကိုရှာဖွေသည့်နေရာ၌မီးရှို့ထားသောသင်္ချိုင်းသဖွယ်ဖြစ်သည်။ […]
16 အောက်တိုဘာလ 2021 15 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား Tigray လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဖြစ်ရပ် Amharic စကားဝိုင်း
(ရင်းမြစ်: UMD Media) -
16 အောက်တိုဘာလ 2021 15 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား ወገንተኛው፣ መርህየለሹናየለሹናከጅምሩየከሸፈውየአፍሪቃሕብረትሽምግልና
(በሙሉጌታገብረሕይወት: መስከረም ၂၀-၂၀၁၄)-ትርጉም-አገኘሁእናንጉሱከተባበሩትመንግስታትመመሪያዎችአንዱእንደሚለውግጭቶችንለመከላከል፣ ለማስተዳደርእናከሁሉምበላይግጭቶችንለመፍታትሽምግልናበጣምውጤታማከሆኑዘዴዎችአንዱነው ይህእንዲሆንግንትልቅስምናዝናያለውንሸምጋይከመሰየምበላይየሆነድርጊትይጠይቃል ይህሂደትስኬታማእንዲሆንቢያንስበግጭትውስጥያሉወገኖችበአሸማጋዩድርጅትናግለሰብላይመስማማትአለባቸው ውስጥያሉትተፋላሚዎች […]
Tigray ရှိအခြားနိုင်ငံရေးအင်အားစုများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်အီသီယိုးပီးယားနှင့် TPLF တို့အကြားညှိနှိုင်းမှုသည် Tigray ရှိအတိုက်အခံပါတီသုံးခု
15 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား Tigray ရှိအခြားနိုင်ငံရေးအင်အားစုများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်အီသီယိုးပီးယားနှင့် TPLF တို့အကြားစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုသည် Tigray ရှိအတိုက်အခံပါတီသုံးခု
Tigray ရှိအတိုက်အခံပါတီသုံးခု (Tigray လွတ်လပ်ရေးပါတီ၊ Salsay Weyane Tigray၊ Great Tigray အမျိုးသားကွန်ဂရက်) သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်သောကြာနေ့တွင်သမ္မတ Biden ၏အုပ်ချုပ်မှုအမိန့်နှင့် EU ၏လှုပ်ရှားမှုအတွက်ချီးကျူးသောကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အီသီယိုးပီးယားအစိုးရနှင့်မဟာမိတ်များက Tigray ပြည်သူများကိုတစ်နှစ်ကြာလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟုကြေညာချက်ကသတိပေးသည်။
ဘက်မလိုက်၊ လွတ်လပ်မှုလည်းမရှိ၊ Tigray ရှိ UN-EHRC ပူးတွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့
15 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား ဘက်မလိုက်၊ လွတ်လပ်မှုမရှိ၊ Tigray ရှိ UN-EHRC ပူးတွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး
(Source: WORLD PEACE FOUNDATION) - Chidi Odinkalu, Paulos Tesfagiorgis, Alex de Waal နှင့် Delia Burns တို့ကမတ်လတွင် Tigray ပဋိပက္ခအတွင်းကျူးလွန်ခဲ့သောလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုစွပ်စွဲချက်များကိုပူးတွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အီသီယိုးပီးယား၊ အငြင်းပွားစရာမှာပါတနာသည်အီသီယိုးပီးယားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် (EHRC) ဖြစ်သည်။ […]
Eritrean စစ်သားများနှင့် Amhara ပြည်သူ့စစ်တို့ကအသက် ၆၅ နှစ်ရှိ Tigrayan သီလရှင်အားအကြိမ်ကြိမ်မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့သည်
15 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား Eritrean စစ်သားများနှင့် Amhara ပြည်သူ့စစ်တို့ကအသက် ၆၅ နှစ်ရှိ Tigrayan သီလရှင်အားအကြိမ်ကြိမ်မုဒိမ်းကျင့်သည်ကိုလူအများရှေ့တွင်တွေ့ရသည်
(Source: Globe News Net) - အသက် ၆၅ နှစ်အရွယ်သီလရှင် Ms. Tiemtu Afewerki သည်သူမ၏ဘ ၀ ကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာနေထိုင်ပြီးသူမ၏ဘုရားသခင်အတွက်ဆည်းကပ်ခဲ့သည်။ သူမဟာအိမ်ထောင်ရေးမှာဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးဘယ်တုန်းကမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ သူမသိသည်မှာသူမအားလုံးသည်သူမ၏ဘုရားသခင်၊ သမ္မာကျမ်းစာနှင့်သူမ၏ဆုတောင်းချက်များသာဖြစ်သည်။ သူမဘဝသည်အများစုမှာအီသီယိုးပီးယားနှင့်ပြည်တွင်းပြည်ပဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင်ဖြစ်သည်။ […]
14 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား တူရကီသည်လက်နက်ကိုင်ဒရုန်းများကိုအီသီယိုးပီးယားနှင့်မော်ရိုကိုသို့ရောင်းချမှုတိုးချဲ့ခဲ့သည်
(Source: Reuters, By Orhan Coskun and Jonathan Spicer, Ece Toksabay) - Bayraktar မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုယူကရိန်းနိုင်ငံ Kyiv အလယ်ပိုင်း၌ယူကရိန်းနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေ့စစ်ရေးပြပွဲအတွက်အစမ်းလေ့ကျင့်နေစဉ်တွေ့ရသည်။ REUTERS/Gleb Garanich/File Photo Summary Demand for တူရကီစစ်တပ်အောင်မြင်မှုများပြီးခဲ့သောလများအတွင်းအီသီယိုးပီးယား၊ မော်ရိုကိုသို့ဒရုန်းများတင်ပို့မှု […]
ကနေဒါနှင့် Tigray စစ်ပွဲ
14 အောက်တိုဘာလ 2021 14 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား ကနေဒါနှင့် Tigray စစ်ပွဲ
(Source: Canadian Dimension, By Fifi H. ) - Trudeau အစိုးရသည်စစ်ရာဇဝတ်မှုများရှိသည်ဟူသောစွပ်စွဲချက်များကြားမှ Trudeau အစိုးရသည်အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမြို့တော် Addis Ababa သို့ထိုင်ခုံတစ်ခုအားထောက်ခံရန်ကြိုးပမ်းသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာကနေဒါအတွက် […]
Tigray တွင်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကို ၀ န်းရံသည်
14 အောက်တိုဘာလ 2021 14 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား Tigray တွင်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ခြင်းဝိုင်း
(Source: Globe News Net, By Leake Zegeye) - Tigrai ၏လူ ဦး ရေ ၆ သန်းကျော်ကိုလုံး ၀ ဝိုင်းရံထားမှုအားလူသားမျိုးနွယ်ဆန့်ကျင်သောရာဇ ၀ တ်မှုများအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ သုတ်သင်ရှင်းလင်းရေးရာဇ ၀ တ်မှု။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်း၏ရာဇ ၀ တ်မှုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ Alex De Waal ၏ Darfur ထက်အများကြီးပိုဆိုးသည်မှာသေချာသည်။ […]
13 အောက်တိုဘာလ 2021 16 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား Abiy ၏အလယ်ခေတ်စစ်ပွဲကို A မျှတသောချဉ်းကပ်မှုတွင်တရားမျှတမှုကိုပျက်ရယ်ပြုစေသည်
(Source: The African Report, By Dr Debretsion Gebremichael - President of Tigray) - Tigray အစိုးရနှင့်ပြည်သူတို့သည်ဖျက်ဆီးခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုများကိုမရင်ဆိုင်သင့်ပါ။ Tigray တွင်အီသီယိုးပီးယားနှင့် Eritrean အစိုးရများ၏လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုစစ်ပွဲအားနိုင်ငံတကာတုံ့ပြန်မှုသည်ဆိုးရွားစွာမလုံလောက်ပါ။ ဒါပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ရှုပ်စရာကဘာလဲ။
Tigray စစ်ပွဲအမှာစကားများနှင့် ပတ်သက်၍ ဒုတိယမြောက်ကုလသမဂ္ဂလူ ဦး ရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့မှအရာရှိကပြန်ပြောပြသည်
12 အောက်တိုဘာလ 2021 meketea Comment ချန်ထား ဒုတိယမြောက်ကုလသမဂ္ဂလူ ဦး ရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူက Tigray စစ်ပွဲအမှာစကားများကိုပြန်ပြောပြသည်
(Source: Yahoo News, AFP, Robbie COREY-BOULET, October 12, 2021, 6:27 PM)-ကုလသမဂ္ဂလူ ဦး ရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့သည်၎င်း၏အီသီယိုးပီးယားအကြီးအကဲအားပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းအေဂျင်စီကအင်္ဂါနေ့ကပြောကြားခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂအဆင့်မြင့်အရာရှိများက၎င်းတို့နှစ် ဦး သည် Tigrayan သူပုန်များကိုစာနာကြောင်းပြောခဲ့သည်ဟုအရာရှိနှစ် ဦး စလုံးကစောဒကတက်သည်။ ထွက်ခွာမှု […]
တီဂေး၊ အီသီယိုးပီးယား၊ admin@meketetigray.uk။ ဒီ site ပေါ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်ထင်မြင်ချက်များနှင့်အမြင်များကိုသာစာရေးဆရာများများမှာ! Mekete Tigray UK သည်သူတို့ကိုသေချာစွာထောက်ခံခြင်းမရှိပါ။
မျက်မြင်သက်သေ - Tigray ၌ Mahbere Dego အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုရိုက်ကူးခဲ့သောအီသီယိုးပီးယားစစ်သား
Amhara Bishop က ၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် Junta (Tigrayans) အုပ်ချုပ်သည်ထက်စာတန်၏အုပ်ချုပ်မှုကိုပိုနှစ်သက်သည်ဟုဆိုသည်။
Tigrayans များအပေါ်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကြေငြာချက် Daniel Kibret ကြေငြာချက်။
အီးယူသံတမန် Finish FM Pekka Haavisto - အီသီယိုးပီးယားခေါင်းဆောင်များက“ သူတို့ဟာ Tigrayans တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်မယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Amhara တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ် Agegnehu Teshager မှဥက္ကigr္ဌကလူမျိုးစုများအားမျိုးဖြုတ်သုတ်သင်ရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်
စစ်ပွဲ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ Tigray ကိုဖျက်ဆီးရန်ဖြစ်သည်။
အီသီယိုးပီးယားစစ်တပ်မှအဆင့်မြင့်အရာရှိတစ် ဦး အားခွဲခြားဆက်ဆံမှုများမပြုရန်ညွှန်ကြားထားသည် -“ ယခု မှစ၍ ၎င်းတို့သည်တိုက်ခိုက်ခြင်း (ဗုံးခွဲခြင်းနှင့်သေစေခြင်း) ခံရလိမ့်မည်။ သူတို့သည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်လျှင်အသင်းတော်သည်ပျက်စီးလိမ့်မည်။ လက်နက်ကိုင်လူများနှင့်မနီးမဝေးရှိအရပ်သားများအား၎င်းတို့အားလူ (သို့) ကလေးများဟုခေါ်သည်ဖြစ်စေ၎င်းတို့အားအတူတကွတိုက်ခိုက် (ဗုံးကြဲ (သို့) သတ်ဖြတ်) လိမ့်မည်။ ဟာသမရှိဘူး။ သူတို့ကိုရိုက်နှက်ဖျက်ဆီးပစ်ရမယ်။ "
ဆော်ဒီအာရေဗျရှိ Tigrayan ဒုက္ခသည်များအပေါ်ဆိုးရွားသောပူးပေါင်းကြံစည်မှုများနှင့်စွပ်စွဲမှုများတွင်ကုလသမဂ္ဂအီသီယိုးပီးယားနှင့် IOM အီသီယိုးပီးယား ၀ န်ထမ်းများ ၀ င်ရောက်စီးဆင်းနေသည်။
Ethio ဖိုရမ်: የህወሓትርዝራዥማንነው ?፤ “ የጁንታው” ቅሪትስእነማንናቸው?
Abiy Ahmed က Eritrean အင်အားစုများသည် Tigray သို့ရောက်ရှိနေပြီးရက်စက်ယုတ်မာမှုများကျူးလွန်နေကြသည်ဟုဝန်ခံသည်
ဘာအထောက်အထားရှိသလဲ။ Eyeru #StopWarOnTigray #TigrayGenocide မှကဗျာတစ်ပုဒ်
Tigray (LA Times) #StopWarOnTigray #TigrayGenocide မှအဓမ္မပြုကျင့်ခံရသူအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ရေးဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ထွက်ပေါ်လာ
အီသီယိုးပီးယားစစ်တပ်မှဗိုလ်မှူးချုပ်က Eritrean တပ်များသည် Tigray တွင်တိုက်ခိုက်နေသည်ဟုအတည်ပြုပြောကြားသည်
ሌ / ጀነራልታደሰወረደ: ကိုယ့်လူမျိုးကိုသတ်ရန်နိုင်ငံခြားစစ်တပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းပြီး Tigray စစ်ပွဲအတွင်း Isaias နှင့် Abiy ပူးပေါင်းမှုသည်တရားမ ၀ င်ပါ။
မျက်မြင်သက်သေများက Mai-Kadra တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာကိုမှတ်တမ်းတင်ကြသည်
အီသီယိုးပီးယားအကျပ်အတည်း - Tigray ဒေသမှဆရာဝန်၏အမြင် - Kemal Erkan & Dr. Isaias Irgau
ဆူဒန်နိုင်ငံရှိအီသီယိုးပီးယား - Tigrayan ဒုက္ခသည်များသည်လူမျိုးရေးသတ်ဖြတ်မှုမှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသည်
Tigray ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ Eritreans ကိုတိုက်တွန်းထားတဲ့သက်ဆိုင်ရာ Eritrean စစ်သားတွေရဲ့သတင်းစကား
Yilam Tadesse၊ အာဖရိကသမဂ္ဂမှအီသီယိုးပီးယားသံအမတ်ကြီးကသူ၏အမ်ဟာရာ၏အားသာချက်ကိုပြောကြားခဲ့သည်
လုယက်ဆေးရုံများနှင့်အချည်းနှီးသောမြို့များ, Tigray အတွင်းမှသီးသန့်ကြည့်
DW ပflိပက္ခနယ်မြေ - အီသီယိုးပီးယား၏ Tigray ပconflictိပက္ခသည်အမှန်တကယ်ပြီးဆုံးပြီလား။
Shire Residents မှရုပ်မြင်သံကြားအစည်းအဝေးတွင် ENDF ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် Mulu Nega အားပြောကြားရာတွင်“ လူများသည်ကြက်ကဲ့သို့သတ်ခြင်းခံရသည်”
Gorilla ရေဒီယို - Tigray အပေါ်လက်ရှိစစ်ပွဲကိုနားထောင်ပါ
Aljazeera The Stream - အီသီယိုးပီးယားရဲ့စစ်ပွဲဟာအစပဲရှိသေးသလား။
ယူအေအီးကိုဆန့်ကျင်သောမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များသည်ဂျာမနီ၊ ဘာလင်ရှိ Tigray ဆန္ဒပြမှုအပေါ်စစ်
အီသီယိုးပီးယား၏ Tigray အကျပ်အတည်း - လူသားချင်းစာနာမှုနှင့်နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်း
Zalambessa ရှိ ENDF & Eritrean ကြည်းတပ်၏ရက်စက်ယုတ်မာမှုများ
Amhara တော်လှန်ရေးတပ်မတော်ကြည်းတပ်အပိုင်း ၁ မှမသန့်ရှင်းသောသတင်းစကား
အီသီယိုးပီးယားတွင်ဖြစ်ပွားနေသောပconflictိပက္ခနှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီမှကြားနာခြင်း (ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၂၀)
Abiy ၏ Mekele လူ ဦး ရေကိုသတ်ဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်သည်
အီသီယိုးပီးယားရှိ TIGRAY ပFLိပက္ခသည်အမှန်တကယ်ပြီးဆုံးပြီလား။
ဟူစတန်တက္ကဆက်ပြည်နယ်မှအနက်ရောင်အာဖရိကန်အမေရိကန်အသိုင်းအဝိုင်းသည် Tigray ကိုထောက်ပံ့သည်
UPDATE0AFRICA OF ORNICA ဦး သိန်းစိန် Martin Plaut - Tigray အပေါ်စစ်ပွဲ
CNN - အနောက်တိုင်းတီဂေးရှိလူမျိုးစုများသန့်စင်ခြင်း
Tigray ရှိအိမ်များကိုမီးရှို့နေတဲ့ Eritrean စစ်သားတွေ
အငြိမ်းစားအီသီယိုးပီးယားအထွေထွေကတ်စေး Chemeda ကလူငယ်တွေကိုသေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ဖို့အီသီယိုးပီးယားအစိုးရကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင်အဟားရာအထက်တန်းလွှာများကတီဂျီလူမျိုးများကိုမုန်းတီးပြောဆိုခြင်း
Amhara နှင့် Tigray နယ်မြေနယ်နိမိတ်သဘောတူညီချက် ၂၀၀၉
Amhara Elites သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်27ပြီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် Amhara ပိုင် Aksum ဟုပြောဆိုသည်
အောက်တိုဘာလ 2021 (73)
စက်တင်ဘာလ 2021 (91)
သြဂုတ်လ 2021 (133)
ဇူလိုင်လ 2021 (161)
ဇြန္လ 2021 (172)
မေလ 2021 (204)
ဧပြီလ 2021 (236)
မတ်လ 2021 (317)
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2021 (239)
ဇန်နဝါရီလ 2021 (84)
ဒီဇင်ဘာလတွင် 2020 (131)
နိုဝင်ဘာလ 2020 (68)
အောက်တိုဘာလ 2020 (1)
Irob Advocacy အစည်းအရုံး
မူပိုင်ခွင့်© 2020 Mekete Tigray UK ။ မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။	| အဓိကအကြောင်းအရာ - News Portal နက်နဲသောအရာဖြစ်စဉ်များ.